Translated by Khaing Su Lwin Original Article from Water, Land and Ecosystem (WLE) Website​မိလႅာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ အားသြန္ ခြန္စိုက္ လုပ္ခ်င္စရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုလို႔ ျမင္မိခ်င္မွ ျမင္မိၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ သင္ဟာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈထားတဲ့ စီးပြားေရးဆိုရ...
​A symposium and technical workshop - The Science and Policy of Environmental Flows in Myanmar was held on 15th August 2018 at Inya Lake hotel by WWF Myanmar.U Cho Cho, chairman of NWRC Advisory Group and Professor Dr. Khin Than Yu, pro-rector of Yangon Technological University gave an opening and w...
Valuable presentations and case studies... - Myanmar Water Portal | Facebook Valuable presentations and case studies during Symposium Environmental Flows in #Myanmar🇲🇲 and how to developa#eFlows #framework #waterMM #YTU #NWRC... https://www.facebook.com/127180144583717/posts/251387415496322/ Enter...
One of the biggest international water & wastewater exhibition which presents water solutions for the industry development, Myanwater 2017 was held at MEP Mindama, Yangon on 23-25 November. The trade show also serves asaprofessional environment for showcase of current developments and in...
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေက မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှု ကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ် က မယ်ဆိုင် ချောင်းမှာ ရေကြီး ရေတက် ခဲ့လို့ မြို့ပေါ်က အိမ်တွေ ရေနှစ်မြုပ် မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ခုနှစ်ရာကျော် နဲ့ အိမ်ခြေ စုစုပေါင်း ၆၃၂ အိမ် ထိခိုက် ပျက်စီး ခဲ့ရကြောင်း တာချီလိတ် ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရ...
WaterWaveMM Dredging Port Mandalay Disaster Risk Assessment Water Quality Twante Canal Sewage Climate Change Netherlands